[Review] Top 5 Bếp gas Sunhouse loại nào tốt nhất nên mua | Muasalebang - Muasalebang
[Review] Top 5 Bếp gas Sunhouse loại nào tốt nhất nên mua | Muasalebang
Đang Đọc: [Review] Top 5 Bếp gas Sunhouse loại nào tốt nhất nên mua | Muasalebang in Muasalebang
Abathengi abaningi namuhla badidekile phakathi kokukhetha Isitofu segesi se-sunhouse Noma eminye imigqa emakethe? Ngoba manje sekukhona nemikhiqizo ethengisa izitofu zegesi zekhwalithi efanayo ne-sunhouse. Ake sithole isihloko esilandelayo sokwabelana ukuze sithole izimpendulo futhi sithole ulwazi olwengeziwe mayelana nezitofu zegesi ze-sunhouse eziphezulu ezingu-5 ezihamba phambili, abantu abaningi abakhethayo.
1 Izinhlobo zezitofu zegesi ze-Sunhouse
2 Ingabe kufanele ngithenge isitofu se-Sunhouse Gas?
2.1 Impahla kanye nomklamo
2.2 Ubuchwepheshe bokukhiqiza
3 Izitofu ezi-5 ezihamba phambili ze-Sunhouse gas ongazithenga namuhla
3.1 1. SHB5538 . isitofu segesi esakhelwe ngengilazi
3.2 2. Isitofu segesi se-Sunhouse SHB3670 esinengilazi phezulu
3.3 3. Isitofu segesi seSunhouse Mama MMBB0787MT ingilazi ephozithivu
3.4 4. Isitofu segesi se-Sunhouse SHB8836 esinomsindo wengilazi
3.5 5. Isitofu segesi se-Sunhouse SHB3226 ingilazi ephozithivu
Izinhlobo zezitofu zegesi ze-Sunhouse
I-Sunhouse brand ihlinzeka ngezinye zezitofu zegesi ezilandelayo emakethe:
Okokuqala, isitofu segesi yang sisho isitofu esiphindwe kabili esinezitofu ezimbili. Lesi sigaba sizofaka imibala eminingi nemiklamo ehlukene. Ngaphandle kwalokho, umklamo untekenteke ngamaphethini ahlukile, ahlukahlukene futhi athambile. I-cooktop yenziwe ngengilazi epholile, ukumelana nokushisa okuhle, ihlala isikhathi eside. Ngaphezu kwalokho, i-magneto green ignition system, iyashesha, futhi yonga igesi. Eminye imigqa ephezulu inenzwa ezenzakalelayo evala igesi ngokuphepha kumsebenzisi.
UMsombuluko, Isitofu segesi esisodwa esilungele abantu abangashadile, abafundi, indawo encane yekhishi. Idizayini yekhishi iyimfashini impela, icocekile futhi iyinkimbinkimbi. Indawo yokupheka kulula ukuyihlanza ngesistimu yokuthungela eyimishini esheshayo.
ULwesibili, I-infrared electromagnetic double cooker. Kulolu hlobo, uma usebenzisa, uzoba nolwazi lwakho kokubili isitofu se-infrared kanye nompheki wokungenisa. Ikakhulukazi, ingafakwa ngaphansi noma ibekwe etafuleni elivamile. Ikhishi linezinsiza eziningi ezihlakaniphile ezingashiwo njengokuvala shaqa okuzenzakalelayo uma kushisa ngokweqile, ukukhiya ukuphepha kwezingane …
NgoLwesithathu, Isitofu segesi se-acoustic esinomklamo wesimanje futhi kanokusho. Isistimu yokushisa yenziwe ngamabhethri azwela kakhulu, ehlisa ukulahlekelwa kwegesi ngaphandle. I-cooktop yenziwe ngengilazi epholile yekhwalithi ephezulu, ukumelana nokushisa okuhle. Izinhlobo eziningi zezitofu ezakhelwe ngaphakathi zinesici esengeziwe esivala ngokuzenzakalelayo igesi lapho umlilo ucishiwe.
Ingabe kufanele ngithenge isitofu se-Sunhouse Gas?
Isitofu segesi se-sunhouse kuthathwa njengophawu olujwayelekile kubantu baseVietnam. Umkhiqizo ngoweqembu elibizwa nge-Sunhouse, okuwuphawu oluhamba phambili ebhizinisini nasekukhiqizweni kwempahla yasendlini. Ayaziwa kuphela ngezitofu zegesi ezijwayelekile, izitofu zegesi ezingezinhle zaseSunhouse nazo zinhle impela. Isu lebhizinisi eliyinhloko yizinto ezishibhile zasendlini kanye nekhwalithi eqinisekisiwe.
Uma unesidingo sokuthenga isitofu segesi, kufanele ukhethe uhlobo lwe-Sunhouse ngenxa yalezi zici ezilandelayo:
Impahla kanye nomklamo
Izitofu zegesi ezivela kumkhiqizo we-Sunhouse ziklanyelwe ukusiza abasebenzisi bazizwe bejabule. Ngoba ikhishi linephethini eliyingqayizivele elingemuva elimnyama. Ingilazi epholile yenza ingilazi iqine. Idizayini ilula kodwa ayikho ngaphansi kokunethezeka, kanye nama-motif amhlophe. Ngalokhu, ukuheha amehlo abasebenzisi kusiza ukungazihlanganisi neminye imikhiqizo.
Mayelana nokuma, ikhishi liqinile impela linezinhlangothi ezinhlanu ezicwebezelisiwe zokuvikela unyawo. Ukusuka lapho, ukuqinisekisa ukuzinza kuhlala kuyinombolo yokuqala. Ngaphandle kwalokho, imininingwane yokufafaza nge-electrostatic imelana nokuhuzuka, izinga lokushisa eliphezulu, i-oxidation, ukushelela kanye nokuwohloka. Umklamo ngaphakathi kwe-rack kulula ukuhlanza, ukumelana nokushisa okuhle.
Ngokwezingxenye, isitofu sinezinduku ezimbili zepulasitiki ezisebenziseka kalula, zibushelelezi esandleni lapho zinciphisa amandla okuchitha igesi, lungisa izinga lokushisa lapho zisetshenziswa. Igumbi elivuthayo elinosayizi omkhulu kanye namasongo omlilo angu-2 agxilile asiza ukusabalalisa ukushisa ngokulinganayo phansi ebhodweni, ukunciphisa isikhathi sokupheka. Okuthokozelwa ngabasebenzisi ngalolu hlobo lwesitofu isistimu yokuvala igesi engenisa igesi ezenzakalelayo. Lokhu kwandisa amathuba omhlangano wevalvu yethusi ephephile.
Le modeli yekhishi ikhiqizwa ngokusho kobuchwepheshe obuyinhloko baseKorea. Mayelana nobuchwepheshe, ngezinzuzo ezinhle, intengo inengqondo uma iqhathaniswa nobunye ubuchwepheshe. Ngalokhu, kusiza ukunqoba ngisho nabasebenzisi abasheshayo ngokuqina okuhle. Kuye ngezidingo zomuntu ngamunye, khetha ukuthenga isitofu segesi esivumayo noma isitofu segesi esibi. Umugqa ngamunye unamaphuzu awo avelele.
Imikhiqizo yesitofu segesi evela kumkhiqizo we-Sunhouse ihlanganiswe nezici eziningi ezilula. Ikhishi liyathengeka impela, lilungele izingxenye eziningi emakethe. Lona futhi ibhrendi ethembekile, ngakho-ke umkhiqizo wenza abasebenzisi bazizwe bevikeleke kakhulu.
Izitofu ezi-5 ezihamba phambili ze-Sunhouse gas ongazithenga namuhla
Nazi izinhlobo ezi-5 Isitofu segesi se-sunhouse Ukuthenga okungcono kakhulu okudingeka ukwazi:
1. SHB5538 . isitofu segesi esakhelwe ngengilazi
Umklamo wokunethezeka, obekwe ngendlela yodonga, usiza ikhishi libe libanzi, elinomoya, lesimanje, lingagxili. Isikhala sekhishi siba sihlaba umxhwele ngokwengeziwe futhi sinokunethezeka. Okunye okugqamile kwesitofu segesi esikhala ingilazi se-SHB5538 kungashiwo kanje:
Ukungcoliswa okuncane, ukumelana nokushisa okuphezulu, isisindo esikhulu.
Indawo yekhishi enengilazi epholile ilula ukuyihlanza, ikhanya futhi inhle.
Sebenzisa ngokuphepha, unciphise ingozi yokuvuza kwegesi, umlilo nokuqhuma.
Isistimu yokubasa esebenza ngebhethri engu-1.5V IC ikhipha inhlansi ezwelayo nesheshayo.
Isitendi sasekhishini esinemilenze emihlanu siqinile, sisinda, futhi siwugqinsi ngoba sakhiwe ngensimbi ewukhonkolo. Ngakho-ke, ukubeka izitsha zokupheka kulinganisela futhi kulula.
Umshini wokushisa owenziwe ngethusi, lapho upheka ilangabi elihlaza okwesibhakabhaka ngomklamo onezimbobo eziningi ezincane. Ukusabalalisa ukushisa kunengqondo, ngisho, ukupheka ngokushesha. I-burner ihlala isikhathi eside, iminyene, i-anti-deformation, igqoke isikhathi eside.
Isici sinqamula igesi ngokuzenzakalelayo lapho kuchitheka ukudla noma kuvunguza umoya, okubangela ukuthi umlilo ucime. Lokhu kusiza abasebenzisi ukuthi bahlale bephephile ngesikhathi sokupheka.
Isifudumezili esikahle sikusiza ukuthi upheke, ushise, futhi uphekele ukudla ngelangabi elincane ukuze wonge igesi. Isitsha sinzima ukusishisa uma ukhohlwa ukucisha isitofu ngesikhathi esifanele.
2. Isitofu segesi se-Sunhouse SHB3670 esinengilazi phezulu
Umklamo olula futhi nenhle. Indawo yengilazi ecwebezelayo, esezingeni eliphezulu, epholile yenza kube lula ukuhlanza indawo yasekhishini. Okugqamile kwesitofu segesi esibhekene nengilazi iSunhouse SHB3670 yilezi:
I-Magneto ignition system idala izinhlansi ngokusebenzisa injini ukuze yenze umlilo uzwele kakhulu uma ukhanyisa. Ngesikhathi esifanayo, ukugwema umlilo nokuqhuma kuphephe ngokuphelele futhi kusebenza kahle, kugcina ilangabi elizinzile.
I-Burner enempahla yethusi, ezungezwe izikhala eziningi ezincane ukusiza umlilo uvuthe ngokulinganayo, ngokukhazimulayo, ukonga isikhathi, ukugcina ukushisa okuzinzile.
I-knob yokulungisa enengqondo lapho uhlela ingaphambili lekhishi. Abasebenzisi bangalungisa kalula futhi balawule umlilo ofanele wezitsha. Iphinifa elijikelezayo lepulasitiki lempilo ende, ukusebenza okuguquguqukayo, isandla esibushelelezi.
Abakaki basekhishini banezinsimbi zensimbi, abakaki basekhishini bensimbi abanemilenze emihlanu baqinile. Ingxenye eyisiyingi ivikela ngempumelelo ukushelela, ithwala isisindo sezitsha eziningi zokupheka.
3. Isitofu segesi seSunhouse Mama MMBB0787MT ingilazi ephozithivu
Inombolo yezithando: Izithando ezimbili.
Uhlaka lwekhishi: Insimbi.
Usayizi womkhiqizo: 365 x 670 x 160 (mm).
Ikhishi eliphezulu elinengilazi eqinile.
Abakaki basekhishini: Insimbi exutshwe nge-powder.
Ukusetshenziswa kwegesi: 220g/h.
Uhlobo lwegesi esetshenzisiwe: LPG.
Isistimu yokushisa: Magneto.
Ubukhulu bengilazi: 7mm.
Ngaphezu kwemikhiqizo emibili engenhla, ungakhetha ukwengeza ingilazi ephozithivu yesitofu segesi i-Sunhouse Mama MMBB0787MT ngezizathu ezimbalwa:
I-anti-scratch esezingeni eliphezulu futhi esebenzayo, indawo yokupheka yengilazi engashisi. Lapho ingcolile, kulula ukuyihlanza.
Umklamo omuhle, umklamo wefashini, mude, uthambile, ulungele noma iyiphi indawo yekhishi.
Sebenzisa nge-knob elula, impilo ende. Ikhishi liklanywe nge-knob yesitayela esisha ukusekela abasebenzisi ngaphandle kokusebenzisa amandla amaningi, ukusebenza okumnene.
Isistimu yokuthungela kaMagneto ezinzile futhi enamandla iqinile naphezu kokusetshenziswa isikhathi eside.
Isishisi sethusi esinekhwalithi yaseKorea siklanywe ngezikhala eziningi ezincane ukusekela ilangabi lokupheka okusheshayo, ukusabalalisa ukushisa ngokulinganayo, ukonga igesi. Ngisho noma isetshenziswa ekushiseni okuphezulu isikhathi eside, akukho deformation eyenzekayo.
Isitofu sensimbi engagqwali esisezingeni eliphezulu kufanele sinikeze ilangabi eliluhlaza, singakhiqizi umule omnyama, songa uphethiloli, singakwenzi okungaphansi kwebhodwe kube mnyama, kuphephe ngesikhathi sokusetshenziswa.
4. Isitofu segesi se-Sunhouse SHB8836 esinomsindo wengilazi
Umklamo we Isitofu segesi se-sunhouse SHB8836 Ingilazi ye-acoustic ngaphansi kwendawo yekhishi akufanele ithathe isikhala esiningi. Lokhu kwenza ikhishi livuleke kakhulu futhi libe nendawo. Indawo yokupheka yenziwe ngengilazi eqinile ekwazi ukumelana nesisindo esiphezulu namazinga okushisa aphezulu. Ikakhulukazi, ngemva kokupheka, ibuye isheshe ukuyihlanza ngoba ayingcolisiwe kancane.
Ngaphezu kwalokho, isistimu ye-IC yokuthungela ingeyesimanje futhi isebenza nebhethri elisebenza kahle elingu-1.5 V, idala inhlansi ezwela kakhulu. Uma ibhethri liphela, kulula ukulithola, ulithenge futhi ulishintshe. Ingxenye yeknob ivula futhi ivale isitofu segesi, ilungise umlilo kalula futhi ngokuphepha. Ngaphandle kwalokho, ubakaki wasekhishini ngezinto eziqinile ezisansimbi. Idizayini eqinile enemilenze emihlanu ekhiphekayo kanye nokuhlanza okulula.
Ngakolunye uhlangothi, izimbawula ezenziwe ngethusi nezinsimbi ezisansimbi zisiza ukonga igesi. Amandla aphezulu kanye nokuqina, ama-slots amaningi amancane asatshalaliswa eduze kwe-burner, anciphisa ukuguga. Ngalo mklamo, ukudla kuphekwa ngokushesha, kusebenza ngomthamo onamandla we-3.8 kW/h/h/oven. Akukhona lokho kuphela, ikhanda elifudumele libuye lilungele ukusekela abesifazane ekushiseni, ukufudumeza, kanye nokubilisa ukudla kalula, ukonga uphethiloli.
Isici esikhethekile isici sokuvala igesi okuzenzakalelayo. Uma uketshezi, ukudla kubila futhi kuwela esitofini noma umoya onamandla uphephula umlilo, umpheki wokungenisa izihambi uvala ngokuzenzakalelayo igesi. Ngokusekelwe kulesi sici, abasebenzisi baphephe kakhudlwana kunqubo yokupheka. Ayikho ingozi noma ukuchayeka ekuqhumeni kwegesi.
5. Isitofu segesi se-Sunhouse SHB3226 ingilazi ephozithivu
Amapharamitha we Isitofu segesi se-sunhouse SHB3226 ingilazi eqondile
Inombolo yezithando: Amabili.
Impahla yokupheka: Ingilazi eshisayo.
I-PEP: I-PEP yethusi.
Abakaki basekhishini: Insimbi ene-enameled.
Isisindo: 9 kg.
Idizayini yesimanje, idizayini ihlanganiswe ngokuhambisana nemibala, amaphethini, idala izici ezicacile. Indawo yasekhishini iphakanyiswe ngokunethezeka okukhulu. Ezinye zezinto ezivelele kakhulu zalo mugqa womkhiqizo zimi kanje:
Isistimu ye-Ignition IC: Umkhiqizo usebenzisa le sistimu kagesi enebhethri engu-1.5 V ukuze udale inhlansi ezwela kakhulu, ephephile, esebenziseka kalula, futhi okulula ukuyishintsha uma kwenzeka ibhethri liphela.
Ingilazi eqinile yokumelana nokushisa namandla aphezulu. Indawo ebushelelezi yesitofu yenza kube lula ukuyihlanza futhi ayingcolisi ngemva kokusetshenziswa.
Iknobhu yokulungisa umlilo isiza abasebenzisi ukuthi bacime kalula futhi bavule isitofu segesi futhi balungise ilangabi ngendlela othanda ngayo.
Isishisi sethusi esiwugqinsi uma kuqhathaniswa, idizayini yesayensi isekela ilangabi elisatshalaliswe ngokulinganayo. Umlilo oluhlaza usiza ukonga igesi, awukwenzi ingaphansi lebhodwe libe mnyama.
Abakaki basekhishini baqinile kakhulu futhi banemilenze emihlanu eqinile eyenziwe ngensimbi enoqweqwe oluqinile olungeke luphuke noma lugqwale ngemva kwesikhathi eside lusetshenziswa. Ungakwazi ukuqaqa ngokuphelele le ngxenye ukuze uhlanzeke kalula.
Ngokwabelana okungenhla, umfundi kufanele ukuthi uthole impendulo azoyisebenzisa Isitofu segesi se-sunhouse azizona? Lo mkhiqizo unikeza izinhlobo eziningi ezahlukene zezitofu zegesi emakethe. Ngenhla kunezinhlobo ezi-5 kuphela ezithengwa abantu abaningi. Ungakwazi ukusekela izidingo zakho, amanani, imiklamo… uthanda ukuthola umkhiqizo olungile.
Xem Thêm Tổng hợp 15 cách nấu canh gà bổ dưỡng thơm ngon đơn giản cho bữa cơm | Muasalebang
Tai nghe Sony WF-1000XM3 cũ | Muasalebang